Dagaal ganacsi oo ka dhex qarxay Maraykanka iyo Faransiiska | Hangool News
Madaxweyne Trump iyo dhiggiisa faransiiska ayaa eedaymo xooggan oo ku aaddan siyaasadda ganacsiga iswaydaarsaday xilli uu shir madaxeedka G7 uu ka socdo dalka Canada.
“Waan ugu celcelinayaa madaxweyne Trump in tallaabooyinka uu qaaday ay yihiin kuwo lid ku ah dhaqaalaha dalkiisa. Aniga ahaan arrintani waxay iila muuqataa mid mabda’ la xiriirta, kuumana suurto galayso inaad xulufada ka dhex abuurto dagaal dhanacsi. dhammaanteen waxaan ku lugleenahay loollan, sida Suuriya iyo Ciraaq, iyo meelo kale oo dunida kamid ah. Waxaan nahay xulufo waxaan iswaydaarsannaa xogo muhiim ah. Ciidamadeennu waxay si wadajir ah u ilaaliyaan xorriyadda iyo mabaadii’deenna. Marka la eego xaaladda uu caalamku maanta kujiro ma gali karno dagaal ganacsi”
Madaxweyne Macron ayaa intaas raaciyey in kooxdan lixda dawladood ka kooban ay ka maarmi karto Maraykanka:
“Waxaan isku dayayaa inaan madaxweyne Trump ku qancinno in uu caadi kusoo celiyo arrimaha ganacsiga, sababtoo ah waxaan u baahannahay inaan xallino xiisaddaan. Waxaa laga yaabaa in madaxweynaha Maraykanku uusan doonayn in uu go’doon ahaado, balse annaguna sidoo kale danayn mayno sidaas, balse haddii uu arrinku sidaas ahaado, dawladahayagan lixda ahi waxaan leenahay mabaadii, suuq dhaqaale oo taariikh xooggan leh iyo wax waxaas oo dhan ka sarreeya oo ah xoogga dhabta ah ee heerka caalamiga ah ee maanta”